မျုမျုတတတွေးကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မျုမျုတတတွေးကြပါ
Posted by virus on May 29, 2011 in Copy/Paste | 48 comments
ဒီနေ့bbc မှာသတင်းတစ်ခုကြေညာတယ် ဆရာမတွေကျောင်းမှာစာအုပ်ရောင်းတာဈေးကြီးလို့တဲ့ virus အမေကဆရာမပါ တစ်ကယ်တော့စာအုပ်တွေဈေးတင်ထားတာဆရာမတွေမဟုတ်ပါဘူး ကျောင်းအုပ်တွေနဲ့ ပညာရေးမှုးရုံးတွေရယ်က သွားလာစရိတ်တင်ထားတာပါ ဆရာမတွေကျူရှင်သင်တာဖမ်းမယ်ဆို ဆရာဝန်တွေအပြင်ဆေးခန်းထိုင်တာဖမ်းပေါ့ engineer တွေအပြင်မှာလုပ်တာဖမ်းပေါ့ မျှှတပေးမှပေါ့ အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေလေပိုဖီလေဆိုဘယ်မှာတိုးတတ်ပါ့မလဲ လူတန်းစားတစ်ရပ်မှာပညာရေးဆိုတာအဓိကပဲ ပညာမြင့်မှလူမျိုးတင့်မည်တဲ့အခုတော့နှိပ်ကွပ်နေတာပဲ ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ
မုန့်လုံးစက္ကူကပ်သလို၊ ဝလုံးအစရှာမရသလို ဘယ်က စရမှန်းမသိပါ။
၁။ ကျမတို့ငယ်ငယ်ကလည်း ကျောင်းဆရာမတွေ ကျူရှင်သင်ကြပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းမှာလည်း တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်း သင်ကြပါသည်။ သူ့အတန်းကလူတွေ သူ့ဆီမတက်မနေရ မရှိပါ။ ဆရာမ အပြင်မှာ စာသင်သည့်အတွက်လည်း ဘယ်သူမှ အပြစ်မတင်ကြပါ။
၂။ ခုခေတ်မှာတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမဆီကို မဖြစ်မနေ ကျူရှင်တက်ရသည်။ မဟုတ်လျှင် ကလေးက ကျောင်းမှာ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပညာပြခံရမည်။ (ဆရာ/ဆရာမတိုင်းကို မဆိုလိုပါ။) အတန်းပိုင်ဆီမှာ ကျူရှင်မတက်ခိုင်းလျှင် ကလေးကလည်း ကျောင်းတက်ရန် ကြောက်နေတတ်ပါသည်။ (သူတို့အသိနှင့် သူတို့ဖြစ်ပါသည်။)
ကလေးသူငယ်တွေဟာ အိမ်တိုင်းရဲ့ အသည်း ၊ အညှာ လို့ ပြောရင်မမှားနိုင်။
ဒါ ကြောင့် ကလေးငယ်များနဲ့ ပါတ်သတ်နေတော့ ပိုပြီး သိသာ မြင်သာ လွန်းသွားတာပါ။
ဒါပေမယ့် အရာရာကို သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့…….. မြင်လာကြပါလိမ့်မယ်။
ပြောမကုန်နိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ထွတ်လာပါလိမ့်မယ်…
virus ရေ မင်းတင်တဲ့ပို့စ်ကို ကြိုက်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်လည်း တင်ဖို့စဉ်းစားနေတုန်းမှာ
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ရတော့ ဝင်ပြီး ဖျီးဖြန်းလိုက်ပါကြောင်း ….
(ကုတင်ဘယ်လောက် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး)ဆိုပြီး ဆိုင်းပုဒ်အကြီးကြီးတွေ တပ်ဆင်ကြပါတယ်
ဆရာ/မတွေက ဘယ်ကျောင်းက ဆရာ/မ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဖို့နေနေသာသာ
အပြင်ဝင်ငွေလည်းရ အိမ်စရိတ်ကာမိအောင် အပြင်မှာစာပြပေးတာကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ရတယ်
တစ်ချို့သော ဆရာ/မတွေက ကျောင်းမှာတော့ သိပ်မသင် ကျူရှင်ကြမှသင်
အတန်းပိုင်ဆရာဆီမှာ မတက်ရင် ….. ဆိုတဲ့ ဆရာ/မမျိုးဟာ မြို့ပေါ်ကျောင်းတစ်ချို့နဲ့
ဒါပေမယ့်လည်း ဆရာစိတ်နည်းပါသူက လက်တစ်ဆုပ်စာ လောက်ပဲရှိပါတယ်
လက်တဆုပ်စာ မကပါ။ ရွာတွေမှာဆိုရင် NGO က ကလေးတွေကို စာအုပ်ဝေရင် ဆရာမတွေ က ကလေးတွေဆီက တအုပ်ဆီ ပြန်တောင်းတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
ဆရာဆရာမတွေက စာအုပ်ဝယ်ပေးတာ၊ ကျောင်းလခစိုက်ပေးတာ၊ အင်္ကျီမရှိလို့ စသဖြင့် စေတနာအရင်းခံ ပေးတာတွေရော တွေ့ဘူးပါသလား။ တွေ့ဖူးချင်အလွယ်လေးပါ၊ မတွေ့ချင်ယောင်ဆောင်ရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး၊ positive attitude နဲ့ ကြည့်ရင် ခင်ဗျားမမြင်ဘူးတာတွေ မကြားဘူးတာတွေ မြင်ရမှာကြားရမှာပါ၊ လက်တွေ့ပြချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တဝိုက်ကို ကွက်ကြည့်ရင် ခင်ဗျား scope ကျဉ်းသွားလိမ့်မယ်၊
ရန်ကုန်တဝိုက်ကို မပြောပါဘူး နယ်တော်တော်စုံစုံ ရောက်ဖူးလို့ပြောတာပါ။ WFP ဆန်ဝေတာမှာ ကျောင်းသား စာရင်းလိမ်တင်ပြပြီး ဆန်ထုတ်တာတွေ့ဖူးပါသလား။ ဆန်ဝေတာရော ဆရာမတွေက သူတို့ဖို့ မပါရင် ကျောင်းသားစာရင်း မကောက်ပေးနိုင်ဘူး ဝေလို့မရဘူးရော မြင်ဘူးပါသလား။ ရွာကိုတလမှ ရရက်လောက်ပဲ လာပြီး မြို့ပြန်နေတဲ့ ဆရာမတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ ရန်ကုန်မှာတော့ အေးဓမြပဲ ကျူရှင်တက်ရင်တက် မတက်ရင်လာထားပဲ။ ဒီတော့ကာ လက်တဆုတ်စာမက များနေပြီကို ပြောချင်တာပဲ။ ဒါတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာ ပြဿနာ အရင်းခံကို လိုက်လံ တူးဆွဖော်ထုတ်ရမယ်။ အဆိုးကို အဆိုးအတိုင်း ရှုမြင်သုံးသပ်ရမည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကောင်းပါသည် ခင်ဗျားဆိုပြီး နေနေလို့ မရတော့ဘူး။
ဆရာ၊ ဆရာမတွေဟာ ကလေးတွေကို အသိပညာ ဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေ က အဲဒီအရွယ်မှာ ဟီးရိုးထားတက်ကြတယ်။ သူတို့အားကျသူတယောက်ယောက်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာက လာဘ်စား၊ ကိုယ့်ဖို့မကျန်ရင် ကျောင်းသားအတွက်လဲ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အတ္တဆန်တဲ့ စရိုက်ဆိုးတွေကို Hero ထားမိရင် သွားပြီပဲ။ ဒါကြောင့် ဆရာတွေကို ပိုပြောရတာ။ ဆရာများကလည်း ဆရာလုပ်ရင် လစာနည်းနည်းပဲ ရမယ်ဆိုတာကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူတဲ့ လူမျိုးမှ အဆင်ပြေမယ်။
သေချာတာကတော့ ဆရာများ ရဲ့ စားဝတ်နေရေးဖူလှုံစေရန် အူမတောင့် စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးရန် အရေးတကြီး အရမ်း လိုအပ်နေပါတယ်။
အသက်မွေးမှု အတက်ပညာတခုအား မည်သည်ကိုမျှ မမျှော်ကိုးပဲ က မှ အ အထိ အခမဲ့ သင်ပေးသော အများက အသပြာဆရာဟု ပြောဆိုလေ့ရှိသော အပြင်လောက ဆရာတယောက်နှင့် ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။
စာအုပ် ဈေးကြီးတယ် ဆိုလို့.. သတိရမိတယ်.. ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး ကြားဖူးတာ..
တနှစ်တခါ ဖြေတဲ့ စာမေးပွဲတွေ အတွက် စာအုပ်ထုတ်ပြီး ဖြေခိုင်းတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ကို ကျောင်းက သိမ်းထားတယ်။ လတိုင်း ဖြေတဲ့ စာမေးပွဲ အသေးစားလေးတွေကို ထိုစာအုပ်နဲ့ ဖြေသွားလိုက်တာ.. နှစ်ကုန်တော့ တဝက်လောက်တော့ ကျန်တယ်။
အဲဒီ စာအုပ်တွေကို စက္ကူစက်ကို ရောင်းစားတယ် ဆိုလား.. ကြားဖူးတာပါပဲ..
ကျောင်းသား ၆၀၀ဝ လောက်ရှိရင် စာအုပ် ၆၀၀ဝ ကွက်တိပါပဲ။
ရောင်းစားရတာ ကျောင်းက လုပ်တာလား ရုံးက လုပ်တယ် ဆိုလားပဲ.. ဆရာမတွေ လုပ်တာတော့ ဟုတ်ဘူး။ အဆင့်ဆင့်.. ကြီးကြပ် ကွပ်ပဲပြီး ညှစ်နေကြတာပါပဲ။
စာအုပ်တွေဈေးသက်သာဖို့အတွက် စာမေးပွဲအောင်ပြီး အတန်းတက်မည့်ခလေးတွေ(နောက်နှစ်ဒီစာအုပ်အသုံးမလိုတဲ့သူတွေ) ဆီကစာအုပ်ကို ပြန်အလှုခံ၊ ဒါမှမဟုတ် ကုလားတွေဝယ်သလို ပိသာချိန်နဲ့ပြန်ဝယ်ပြီး နောက်နှစ်မှာတက်မဲ့ထဲက ချို့တဲ့ တဲ့ ခလေးတွေကို ဈေးချိုချိုနဲ့ (စာအုပ်ဟောင်းပြန်ဝယ်ဖို့ဝန်ထမ်းစရိပ် အမြတ်အနည်းငယ်ယူပါ ) ပြန်ရောင်းရင်သက်သာနိုင်မယ်ထင်တယ်၊ အောင်သွားတဲ့ခလေးအများစုကလည်း စာအုပ်တွေကိုအချိန်နဲ့ဘဲရောင်းစားမယ်ထင်တယ်။
Zaw Myo Hlaing says:
လက်တစ်ဆုပ်စာ အတွက် ဝါးလုံးသိမ်းရန်းရင် မှားပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာန မျိုးစုံမှာ ရုံချိန်အတွင်း လာဘ်စားတာကို ဘယ်သူမှ အရေးလုပ် မပြောကြပေမယ့် ဆရာဆရာမတွေကိုကြ ပေးရမှာ တွန့်တိုနေကြတယ်။
ဆရာဆရာမတွေကို အနန်တော အနန်တ ဂိုဏ်းထဲ ထည့်ပြီး ထမင်း အငတ် ထားနေကြတယ်။
မြို့ကြီးတွေက ဆရာဆရာမတွေမှာတောင် အားလုံး မကောင်းကြတာ မဟုတ်ပါဘူုး။
နယ်မှာ (အထူးသဖြင့် ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ) လစာ ၂ သောင်းကျော် ၃သောင်းလောက်နဲ့ မဝရေစာ စားနေရတဲ့ မူုပြ/လယ်ပြတွေ အတွက်ကြတော့ စာနာတဲ့ အသံ တွေ ပျောက်နေပါတယ်။
ကိုယ့် အတ်တ ရှေ့တန်းတင် မပြောကြဖို့ ဆရာ ဆရာမများဘက်မှ ရှေ့နေ လိုက် ပြောလိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်ခွဲတာမှာ… ပညာရေးအတွက်.. နကိုရှိတာကို ၃-၄ဆ တင်ပေးသင့်တယ်..။
ဒီနှစ်ဘတ်ဂျက်က ခွဲပြီးသားမို ့.. ဘာမှလုပ်မရတော့ပေမဲ့.. နောင်နှစ်အတွက်… အခုလောက်ကတည်းက… တောက်လျှောက် သတင်းတွေမှာရေးနေပြောနေသင့်တယ်..။
ဘက်ဂျက်များများကျလာရင်.. စာအုပ်ဖိုး၊ ကျောင်းလခ၊ စာသင်ခုံ ကစလို့.. အကုန်အစိုးရက ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ရအောင်လုပ် ပေးမှာပေါ့..။
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေလည်း..များများဖွင့်အောင်.. ခွင့်ပြုသင့်တာပဲ..။ အဲဒါဆို.. ဆရာတွေလစာလည်း… တိုးရလာမှာပေါ့..။
ဒီပို့စ်နဲ့မဆိုင်ပေမယ့် စိတ်ကူးထဲပေါ်လာလို့ မန်းလိုက်ချင်သေးတယ် …
ဆရာ/ဆရာမ လစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၃ သောင်း ၄ သောင်းလောက်ပဲ ပေးတယ်ဆိုတာ အလုပ်မဝင်ခင်ကထဲက ကြိုသိထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ် … ကျေနပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဇွတ်အတင်းလျှောက်လွှာတင်ကြပြီး ဆရာမလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် … လုပ်ပြီးတော့မှ လစာနဲလို့ ဒီလိုလုပ်ရပါတယ် ဟိုလိုလုပ်ရပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိပ်နားမလည်ချင်တော့ဘူး …
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဆရာမတွေကတော့ ဝါသနာပါလို့၊ ဆရာမလုပ်ချင်လွန်းလို့၊ စာသင်ချင်လွန်းလို့ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် …
အခုဆရာမတွေက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆရာမဝင်လုပ်ကြတာလဲ ??
weiwei ရောဘာလုပ်လဲ သိချင်ပါတယ်။ တစ်ဆိတ် ဖြေလို့ရရင်ပေါ့။
ဇွတ်အတင်းလျှောက်လွှာတင်ကြပြီး ဆရာမလုပ်ကြခြင်း လို့စွပ်စွဲတာ ပြန်ပြင်ပါ။
“ဆရာ/ဆရာမ လစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၃ သောင်း ၄ သောင်းလောက်ပဲ ပေးတယ်ဆိုတာ အလုပ်မဝင်ခင်ကထဲက ကြိုသိထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ် … ကျေနပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ”
ဘယ်သူက ကျေနပ်တယ် ထင်ပါသလဲ။ မကျေနပ်လို့ ဘာပြောခွင့် ရှိပါသလဲ။
International ပညာရေးမှာ ခုပြောနေတာတွေ ပြောစရာလိုတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဆရာဆရာမ တွေ ၃၊၄သောင်းရလို့ ကျွန်တော်တို့ ပညာရေးကလည်း ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ မလိုချင်တဲ့ ပညာရေး ကို ရနေတာ တန်ပါတယ်။
အင်းအင်း မကျေနပ်ရင်တော့ ဝင်မလုပ်တာကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မလောက်ငှဘူး အဆင်မပြေဘူးထင်ရင်တော့ ဝင်မလုပ်တာကောင်းပါတယ်။ ဆရာ ဆရာမတွေ နည်းသွားတော့ လုပ်မယ့်သူမရှိတော့ရင် သေချာပေါက် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရတော့မှာပါ။ အခုက အဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်၊ ဆရာမတွေက ကျောင်းရောက်တော့မှ လုပ်မိလုပ်ရာလုပ် ကလေးတွေက အတုယူမိ ၊ ဒီကလေးတွေက နောင် လူကြီးဖြစ်………..
ကျွန်မရေးလိုက်တာ ရိုင်းသွားတယ်ထင်ရင် တောင်းပန်ပါတယ် …
စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပဲ ရေးလိုက်မိတာပါ .. ကျွန်မဘွဲ့ရတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာပဲ ဆရာမပြန်လုပ်ချင်လို့ လျှောက်လွှာတင်လိုက်ပါတယ် … ပြီးတော့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြန်စဉ်းစားတယ် .. အဲဒီတုန်းက လစာက တစ်ထောင်ကျော်ပဲရှိပါတယ် … ကျွန်မ မိဘများက မချမ်းသာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မလောက်ငနိုင်တဲ့အလုပ်မို့လို့ လုပ်ချင်လျက်နဲ့ စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး တခြား အပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပဲ အလုပ်ဝင်လိုက်ပါတယ် .. အခုလိုမန်းလိုက်မိတာက အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို သတိရသွားတာလဲ တစ်ကြောင်းပါပါတယ် …
မဝေဝေ sorryy ပါ
ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ အကုန်ရှုပ်ကုန်ပြီလားမသိဘူး။ ကျွန်တော် ပြောတာ ဒေါသသံ ပါသွားပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းဆရာမို့ပါ၊ ကျွန်တော်2005 မှာ လစာ ၅၄၀ဝ နဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့တာပါ၊ အဲဒီအချိန် ရန်ကုန်မှာ ကျူရှင်ပြတာ သိန်းဂဏန်း ရပါတယ်။ အဲဒါစွန့်ပြီး အလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရည်သွေးတယ် မထင်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ လောက မှာ ရတဲ့သူတွေ ရှိသလို မရတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပါ၊ မရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါ၊ “ဘယ်လိုလူစားမျိုးကို ဆရာလို့ခေါ်မလဲ” အောက်မှာ ကျွန်တော့် comment လေးတွေ ဖတ်ပြီး ဝေဖန်ပေးပါ။
ဟိုဟာဗျာ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ မိန်းမတွေလေ။ လင်ယူရင် ဟိုဒင်းရမယ် ဆိုတာတော့ သိတာပေါ့နော။
ဒါပေမဲ့လဲ ယူကြတာပေါ့။ ဟိုဒင်းရမှာ ကြောက်လို ့ဆိုပြီး လင်မယူပဲ ခိုးစားတဲ့ ခင်ဗျားတို ့တွေကျတော့ နဲနဲ ပိုလန်းတာပေါ့။
တကယ်လို့ဇွတ်အတင်းလျှောက်လွာမတင်ကြဘူးဆိုပါဆို ့။
ကျုပ်တို့၇ရ မှာပေါ့။ ငယ်သားမရှိဘူးဗျ။ ဗိုလ်တွေချဉ်းပဲ တသိန်းလောက်ရှိတယ်လေ။
ဒီတော့ ဆရာ၊ဆရာမတွေ ၃ လေးသောင်း လောက်ပဲ ရမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့လည်း အခု ကျုပ်ရေးနေတဲ့ စာလုံးလေးတွေ
ကို ဒီ ဂေဇာတ်မှာ ရေးတတ်ဖို့သူတို ့က ဆက်လက်ပြီး ဇွတ်အတင်း လျှောက်ရဦးမှာပဲ။
ခင်ဗျား ကြည့်ရတာ မြန်မာပြည် ပညာရေးနဲ့လွတ်ကင်ခဲ့မှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဘယ့်နှယ် မြန်မာတွေစားတဲ့ ငပိက နံတယ်
ဆိုတဲ့ အသံမျိုးထွက်ချင်ရတာလဲ။ ခိုးစားတာကို ရပ်တန်းကရပ်ပြီး လင်ယူသားမွေး ကလေး တစ်ပွေ ့ရလာတဲ့ အခါ အသပြာ
သိပ်ပေါနေလို့ဘိုကျောင်းကို အပ်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းတယ်။ ကျုပ်တို ့တွေ အတွက်တော့ ဒီ ၃ လေးသောင်းစား ဆရာ၊ဆရာမ
တွေကတော့ အားနည်းချက် အချို ့ကလွဲလို့ဘာနဲ ့မှ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သေးပါဘူး။
ဝင်ဆွေးနွေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် ဝေဝေကိုတော့တင်းတယ် သူမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူကိုသူမလေးစားတတ်တာအံ့ပါရဲ eros ကိုရောပေါ့ မမရေခေတ်ကိုကြည့်ပါ ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်းမရိုင်းနဲ့တဲ့ ကျန်တဲ့အားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်တယ် အမေ့အတွက်ဒီပို့ကိုတင်တာပါ
အမေ့အတွက်ရေးပေးတဲ့ virus ကို လေးစားပါတယ်။ ကိုယ်ကောင်းရင်ခေါင်းဘယ်မှမရွေ့ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။
(မမရေခေတ်ကိုကြည့်ပါ ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်းမရိုင်းနဲ့တဲ့) လို့ ရေးတာကို ကြည့်ပြီး virus အနေနဲ့ အမြင်လွဲနေပြီလု့ိ ထင်ပါတယ်။ ဆရာနဲ့ တပည့်နှစ်ဦး ဆက်ဆံရေးမှာ (ကြားက အရေးယူတဲ့လူတွေ မပါ) ဆရာရဲ့ စေတနာ၊ လုပ်ရပ်ကို ကြည့်ပြီး တပည့်ဖက်ကလည်း ခံယူမှုတွေ ကွဲသွားပါတယ်။ စေတနာပါတဲ့ဆရာဟာ ဆရာပါပဲ။ ဘယ်ခေတ်ကိုပဲ ရောက်ရောက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ သူ့နေရာကို ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မဆွေမျိုးအရင်းတွေထဲမှာ ဆရာမတွေရှိပါတယ် … ဆရာမတွေကို ရင်ထဲ အသဲထဲကနေ လေးစားပါတယ် … ဆရာ ဆရာမ အားလုံးကို မဆိုလိုပါဘူး …. မဖြစ်မနေမလောက်ငလို့ လာဘ်စားရပါတယ်ဆိုတာတွေကို ပြောချင်လို့သာ သေချာမစဉ်းစားမိပဲ ရေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ် ….
ကျွန်မရေးမိတာ လွန်သွားတာရှိရင် ထပ်ပြီးတော့ တောင်းပန်ပါတယ် …
နည်းနည်းတော့ ပွဲဆူလာပြီ.. တပ်မ၇ရ စစ်သားကြီးကလဲ အမှန်တွေကိုပြောတော့ တော်တော်လေးနီနေရှာပြီ.. အန်တီဝေလဲ အပြောမတတ်တော့ “ဆဲ” ဆိုသလိုဖြစ်လို့ ဝိုင်းပြီး အပြစ်တင်ခံနေရရှာပေါ့။ ကျွန်တော်လဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဝင်ပြောတော့မယ်စဉ်းစားတယ်။
Virus ရေ အရာရာဟာ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်လာရတာပါ။ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်လာလို့ ကိုယ့်တစ်ဝမ်းတစ်ခါးလှဖို့၊ ဝဖို့အတွက် လူတိုင်းနီးပါးလောက် ဘဝရပ်တည်မှုအတွက် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ရပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက် ရရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ရတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ကြတယ်။ ဒီထဲမှာမှ ” ဆရာ ” ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လျှောက်လှမ်းရတော့မှာပါပဲ။ ဟိုကွေ့ ဒီကောက်လုပ်နေလို့မရပါဘူး။ ဆရာလုပ်မယ်ဆို စီးပွားရေးမလုပ်ပါနဲ့၊ စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆို ဆရာမလုပ်ပါနဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ချင်လို့ ဆရာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဝေဖန် ခံနိုင်ရပါမယ်။ ဆရာ့ကျင့်ဝတ်များကို အတိအကျမဟုတ်တောင်မှ လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေလေးလောက်တော့ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နယ်မှာဆိုရင်တော့ စာအသင်အပြကောင်းတဲ့ဆရာမတွေ အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်ကထွက်ပြီး Private စာသင်ပြစားနေကြတာ ဘယ်သူကမှ အပြစ်မဆိုပါဘူး။ အဲ.. ဒါပေမယ့် အဖြူ၊ အစိမ်းကို ဝတ်ထားပြီး ကျောင်းသားတွေဆီက အေးဓါးပြတိုက်နေတဲ့ဆရာ/ဆရာမတွေကိုတော့ ဘယ်ကျောင်းသားကမှ မလေးစားသလို ဘယ်ကျောင်းသားမိဘကမှလဲ ဆရာဂုဏ်ကို ထုတ်ဖော်ချီးကျူးမှု မပြုကြပါဘူး။ ဒါတွေဟာ ခေတ်၊ စနစ်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာရင် ဒီလိုခေတ်ပျက်ကြီးမှာ ဘာလို့ ဆရာလုပ်စားနေကြပါသေးလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာကို အလေးထားစရာမလိုတဲ့ တစ်ခြားသောအလုပ်အကိုင်တွေကို လက်ရှိကိုယ်ရရှိထားတဲ့ လက်မှတ်တွေနဲ့ လုပ်လို့မရဘူးလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။
“ဖက်ဖူးရောင်” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီဇာတ်ကားပြတိုင်း မိမိတို့ ငယ်စဉ်က သွန်သင်ညွှန်ကြားပြသပေးခဲ့တဲ့ ဆရာစစ်စစ်တွေကို လူတိုင်း ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ ပြန်အမှတ်ရမိကြမြဲပါ။ ထိုကျောင်းဆရာများ၏ မိသားစုများကို သွားကြည့်ကြည့်ပါ။ အများစုမှာ ချို့တဲ့ဆင်းရဲကြပါတယ်။ မိဘတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကို ပါရမီဖြည့်ပေးကြရရှာတာပါ။ ဒါပေမယ့် သားသမီးတွေ ဘယ်တော့မှ မျက်နှာမငယ်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ မိဘနာမည်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ပါ လေးစားမှုနဲ့ ဆက်ဆံကြတာကို ခံကြရမြဲပါ။ ကျွန်တော့်အဖိုးလဲ စစ်ကိုင်း အထက(၁)က ကျောင်းအုပ်ကြီးလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော့်အမေ၊ ဦးလေးတွေ ဘယ်အချိန်ပြန်သွားသွား ထ(၁) ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့ သား/သမီးတွေပါလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းနီးပါး သိကြပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ လိုရင်းကို အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆို ဆရာလုပ်ချင် စီးပွားမရှာနဲ့၊ စီးပွားရှာချင် ဆရာမလုပ်နဲ့
ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ၊ ကျင်ကြီးသွားရင် ကျင်ငယ်မစွန့်နဲ့၊ ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့မယ်။
သူများတိုင်းပြည်မှာ မူလတန်းဆရာ/ဆရာမ လစာနဲ့ အရည်အချင်းဟာ အလယ်တန်းအထက်တန်းထက်မြင့်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်၊ဟုတ်မဟုတ်တော့ အပြင်ကရွာသားတွေ မေးကြည့်ရမယ်။
ဒီမှာလည်း အရင်ကလို BEd တို့ BAEd တို့ ဆရာဖြစ်သင်တန်းတို့ ပြန်ဖွင့်ပေးပြီး ဆရာအရည်အချင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်လည်းပြင် လစာလည်းကောင်းကောင်းပေးဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေနဲ့ပါတ်သက်ရင်.. ကယ်လီဖိုးနီးယားက အမြင့်ဆုံးပါတဲ့..။
ကယ်လီဖိုးနီးယား လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာတော့.. မူလတန်းဆရာ/ဆရာမ လစာနဲ့ အရည်အချင်းဟာ အလယ်တန်းအထက်တန်းထက်မမြင့်ပါဘူး..။
ကျောင်းတွေတကျောင်းနဲ့တကျောင်းမတူပေမဲ့… ကန့်သတ်ချက်တွေတော့ အင်မတန်များတယ်..။
ကျောင်းကိုအမှတ်ပေးစံနစ်ရှိတာမို ့… ကလေးတွေကို.. ဂရိတ်မြင့်တဲ့ကျောင်းတွေဆီ.. အပ်ကြတာပေါ့..။ ကျောင်းသားများတော့.. ကျောင်းက ဝင်ငွေကောင်းတယ်..။ ဝင်ငွေကောင်းတော့.. ဆရာတွေလစာ၊ ဘိုးနပ် ကောင်းတယ်..။
ဒီတော့.. ဆရာတွေကို.. အဲဒီကျောင်းမှာ မြဲအောင်.. တတ်နိုင်သမျှပညာကုန်သုံးလုပ်ကြတယ်..။ ဒီလိုနဲ့ လည်ပါတ်တာပါပဲ..။
ယူအက်စ်မှာ.. ဆရာ၊မိဘ၊ကျောင်းသား ဆက်ဆံရေးဟာ.. အလုပ်ရှင်၊ဝန်ထမ်းပုံစံမျိုးပါ..။
ဆိုတော့.. မြန်မာပြည်ကလိုတော့ မဖြစ်ပါဘူး..။
သဘောက.. ဆရာတွေဟာ..တပည့်ကို အလုပ်ရှင်..ထမင်းရှင်လို ဆက်ဆံနေရတာကိုး..။ မတော်တိုင်ထည့်လိုက်ရင်.. အလုပ်ချက်ချင်းထိခိုက်တာကိုး..။ ဒါပေမဲ့.. ယူအက်စ်က အလုပ်ရှင်၊ဝန်ထမ်း ဆက်ဆံရေးဟာ.. မြန်မာပြည်လိုမဟုတ်ပြန်ပါဘူး..။ အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိပါတယ်..။
အပြန်အလှန်လေးစားမှုဆိုတာမှာ.. အလုပ်ရှင်ရှေ့အလုပ်သမားက..ခြေထောက်ကိုစားပွဲပေါ်တင်တာမျိုးကို.. လေးစားမှုမရှိဘူးလို့.. အမေရိကန်တွေက မယူတဲ့.. ထုံးစံကိုလည်း..သိထားရမှာပါပဲ..။
ဆရာတွေဟာ..ကျောင်းအားရက်တွေမှာ..တပည့်တွေအိမ်ဝင်ပြီး.. ဘာလိုသလည်း တပည့်ဘဝကဘယ်လိုလည်း.. သိအောင်..လေ့လာဝင်စစ်တာမျိုးတွေတော့တွေ့ရတယ်..။
ကျူရှင်ကတော့ .. ကလေးတွေမှာ တပုံတပင်ပဲ..။ ကျောင်းပြီးတာနဲ့.. အဖတာစကူးလ် တွေမှ တပုံ..။ အားကစား၊ အနုပညာ၊ စုံနေအောင်လုပ်ကြရတာပဲ..။ ဆိုတော့.. ဆိုင်ရာ ဆရာတွေ အများကြီးထပ်ထွက်လာတာပေါ့..။
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့.. ယူအက်စ်ပညာရေးစံနစ်အကြောင်း.. အဲဒီထဲလုပ်နေသူကို.. ဆောင်းပါးတပုဒ်လောက်ရေးခိုင်းဦးမှပါပဲ..။
I want to know this problem also occur in England, American, …?Why?
မျှမျှ တတ တွေးကြပါဆိုနေမှ…
virus က ပြောတာက.. ကျောင်းတွေမှာ စာအုပ်ရောင်းတာကျတော့ ပွစိပွစိလုပ်တယ်..
အပြင်မှာ.. ကျူရှင်ပြမယ်ဆိုတော့လည်း မရတဲ့… ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အခြားဘက်ကလှည့်မတွေးပေးကြဘူး ဆိုတာကိုပြောတာ..
ဆန်စင်ရာ ကျည်ပွေ့လိုက်နေလို့ကတော့ဖြင့် အကျိုးမရှိလှဘူးထင်ပါတယ်..
ပညာရေးဝန်ထမ်း ဆရာ..ဆရာမ ဖြစ်ခဲ့ တာကတော့..
စာသင်တာကို ဝါသနာပါလို့…ဆရာ..ဆရာမလည်း ဖြစ်ချင်လို့ ဖြစ်နိုင်သလို..
၁ဝတန်းအောင်ပြီး… တက္ကသိုလ်ကလည်း တက်ချင်.. အိမ်ကလည်း မထားနိုင်… ဒီလိုနဲ့.
အဆောင်လည်းရ…စားစရိတ်လည်း သိပ်မပူရတဲ့.. ပညာရေးကောလိပ်တို့.. ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့ကို တက်ခဲ့ကြရာကလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်..
ဒါကြောင့် လစာကို ဒီလောက်ပဲ ရမယ်လို့သိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အခြားသော အခြေအနေတွေက တွန်းပို့ခဲ့တာကိုလည်း တွေးကြရမှာပါ..
ကျောင်းကို ရောက်တော့ စာသင်ခန်းလေးလှဖို့.. သောက်ရေအိုး.. တံမြက်စည်း..ပြည့်စုံဖို့.. ကျောင်းဝန်းထဲမှာ ပန်းပင်လေးတွေစိုက်ချင်လို့… စိတ်ကူးမိတဲ့အခါ.. မပြည့်စုံတဲ့ ပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..
ပိုဆိုးတာကလေ… အခြားအခြားသော ဝန်ကြီးဌာနတွေက သူ့ဟာနဲ့သူ တရားဝင်.. အပိုဝင်ငွေက ရှိနေကြပြီးသား.. ပညာရေးမှာက ဆရာရယ်.. ကိုယ့်တပည့်ကျောင်းသားတွေရယ်..
နဂိုကမှ အဆင်ပြေနေကြတာ မဟုတ်တဲ့ ဆရာ.. ဆရာမတွေခမျာ.. တရိပ်ရိပ်တက်လာတဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကြောင့်.. အပြင်မှာ ကျူရှင်လေးသင်ပါမယ်ဆိုတော့.. ချစ်လှစွာသော တိုက်ရှိသော ကားရှိသောချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးသော ပညာရေးဝန်ကြီးက ဆရာဆရာမများ ကျူရှင်မသင်ရတဲ့…
ကျောင်းမှာ လျှော့သင်ပြီး ကျူရှင်မှာပဲ ဂရုစိုက်မှာစိုးတာကြောင့် ထုတ်လိုက်တဲ့ ဒီစည်းကမ်းက ကိုယ်လူကိုယ်သတ်သလို ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီး.. အချို့ကျောင်းတွေမှာ အချိန်ပို သင်ပါတယ်.. ကလေးတွေ စာပိုရအောင်လည်း ပါသလို.. အချိန်ပိုကြေးလေးကောက်ပြီး.. ဆရာတွေ ဆရာမတွေခမျာ.. သူတို့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရရှာပါတယ်…
ဒါတွေက ဆရာဆရာမတွေဘက်က အခက်အခဲတွေပါ.. သူတို့မှာသာ အခက်အခဲ ရှိမနေရင်… ဆရာဆိုတဲ့ အမျိုးက ကျုပ်တို့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်မှာ ဘယ်လောက် သဘောထား ပြည့်ဝတယ်ဆိုတာ သိကြပြီးသားပါ…
ကဲ အခု ကျောင်းအပ်ချိန်မှာ.. အလှူငွေ မကောက်ရပါတဲ့…
ဒါဆိုရင်.. ပျက်စီးနေတဲ့ ကျောင်းပရဝုဏ်ထဲက ပစ္စည်းတွေ.. ကာဖို့လိုအပ်နေတဲ့ အုတ်တံတိုင်းတွေ..
ကျောင်းသားထိုင်ခုံတွေ.. ခဏခဏအော်နေတဲ့ ကျောင်းတွင်း သာယာလှပရေး..စိမ်းလန်းစိုပြေရေး..တွေကို ဘာတွေနဲ့ ဖန်တီးမလဲ… ထူးချွန်ကျောင်းသားတွေကိုကော ဘာတွေနဲ့ ဆုချီးမြှင့်ကြမလဲ… အချို့သော အခက်အခဲများကိုတော့.. မိဘဆရာအသင်းနဲ့ ဆရာ..ဆရာမများကိုယ်တိုင်ကသာနားလည်နိုင်မှာပါ..
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲကို နားလည်ဖို့.. ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့သာ ဖြစ်တယ်.. အပြစ်တင်နေပြီးတော့ စကားလုံးတွေနဲ့သာ ဝေဖန်နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး..
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ သိထားကြသလို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများမှာ ယိုယွင်းပျက်စီးနေပါတယ်..
ပညာရေးဌာနထဲမှာလည်း ထို့အတူပါပဲ.. ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ..
တစ်ကယ်ကိုပဲ..သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် မျှမျှတတတွေးကြရင်းနဲ့ ပြင်သင့်တာတွေကို ပြင်သွားရမှာပါ..
ကျွန်တော်တို့ လူဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းဖို့ လိုနေပါပြီ.. စည်းလုံးဖို့ လိုနေပါပြီ..
အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရင်းနဲ့သာလျှင် အဆင်မသင့်တာတွေကို အရေးယူ အပြစ်ပေးသွားနိုင်မှာပါ…
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ လက်ရှိသမ္မတကြီးကလည်း ပညာရေးစနစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်တာကို ပယ်ချထားတယ်ဆိုပဲ..
လုပ်ခွင့်ရနေသူတွေက လုပ်နိုင်သူတွေ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သလို..
လုပ်နိုင်သူတွေကလည်း လုပ်ခွင့်ရဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ လုပ်နိုင်သူတွေ ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင်.. လုပ်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားကြရဦးမှာပါ..
First, I would like to admit:
(1) ဆရာ ဆရာမ တွေကို ရင်ထဲ အသဲထဲကနေ လေးစားပါတယ်
(2) ဆရာများ ရဲ့ စားဝတ်နေရေးဖူလှုံစေရန် အူမတောင့် စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးရန် အရေးတကြီး အရမ်း လိုအပ်နေပါတယ်
On the other hand, I have the same opinion with Eros, Wei Wei & ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ
I think, their comments said “the bitter truth”.
ကလေးတွေ က အဲဒီအရွယ်မှာ ဟီးရိုးထားတက်ကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာက လာဘ်စား၊ ကိုယ့်ဖို့မကျန်ရင် ကျောင်းသားအတွက်လဲ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အတ္တဆန်တဲ့ စရိုက်ဆိုးတွေကို Hero ထားမိရင် သွားပြီပဲ။
“ဒါကြောင့် ဆရာတွေကို ပိုပြောရတာ။”
မကျေနပ်ရင်တော့ ဝင်မလုပ်တာကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မလောက်ငှဘူး အဆင်မပြေဘူးထင်ရင်တော့ ဝင်မလုပ်တာကောင်းပါတယ်။
ဆရာ ဆရာမတွေ နည်းသွားတော့ လုပ်မယ့်သူမရှိတော့ရင် သေချာပေါက် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရတော့မှာပါ။
အခုက အဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်၊ ဆရာမတွေက ကျောင်းရောက်တော့မှ လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်
ကလေးတွေက အတုယူမိ ၊ ဒီကလေးတွေက နောင် လူကြီးဖြစ်……….
ဆရာ/ဆရာမ လစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၃ သောင်း ၄ သောင်းလောက်ပဲ ပေးတယ်ဆိုတာ အလုပ်မဝင်ခင်ကထဲက ကြိုသိထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ် …
ကျေနပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဇွတ်အတင်းလျှောက်လွှာတင်ကြပြီး ဆရာမလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
လုပ်ပြီးတော့မှ လစာနဲလို့ ဒီလိုလုပ်ရပါတယ် ဟိုလိုလုပ်ရပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိပ်နားမလည်ချင်တော့ဘူး …
” ဆရာ ” ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လျှောက်လှမ်းရတော့မှာပါပဲ။
အိမ်ကတူလေးဒီနှစ် ၉ တန်းတက်မယ်။ နွေရာသီမှာ ကတည်းက အတန်းပိုင်ဖြစ်မယ့်ဆရာဆီမှာ ကျုရှင် ထားတာအခုကျောင်းတောင်မဖွင့်သေးဘူး။ ကလေးကိုမှာလိုက်တယ် အခြားကျောင်းသားတွေက အဲဒီဆရာကိုပဲ နောက်ထပ် Guide အနေနဲ့ထပ်ငှားတယ်တဲ့။ ကျုရှင်ခအပြင် Guide ကြေးထပ် ပေးရ မယ်ပေါ့။ အိမ်မှာကျောင်းသားက သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရတယ်။
တူမလေးကတော့နဂိုကတည်းကစာတော်တဲ့သူုဆိုတော့ ကျူရှင်မယူနဲ့ပြောတာမရဘူး။ ကျုရှင်မယူရင် ဆရာမတွေက မျက်နှာထားကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာ ကြောက်တယ်တဲ့။
ဆရာတွေ ကျူုရှင်ပေးတာအပြစ်မဟုတ်ပေမယ့် ကျုရှင်မယူတဲ့ကလေးကို အပြစ်သားလိုတော့မဆက်ဆံသင့်ဘူးပေါ့နော်။
သေချာတာပေါ့။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကျူရှင်သင်တာ ကျွန်တော် အပြစ်မဆိုဘူးဗျ။ စားဝတ်နေရေး အတွက် ကြိုးပမ်းရတာ။ ဒါပေမယ့် ကျူရှင်ယူရင် ယူ မယူရင်သိမယ်ဆိုတာ တွေ လုပ်နေတာ တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျိုး။
အဆိုးတွေကိုပဲ ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် အဆိုးတွေကိုပဲ မြင်ရမယ်
အကောင်းကိုမျှတွေးတတ်ရင် အကောင်းပဲ ထင်ကျန်ခဲ့မယ် ….
ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာမှ မရှိနိုင်ပါဘူး …
အရာရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေကတော့ ရှိနေမှာပဲ
ပြောရရင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းရာကျမှာဗျ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ..
ဒါပေမယ့် အရာရာကို အကောင်းဘက်ကလိုချင်တယ်ဆိုရင် အကောင်းမြင်၊ မကောင်းတာတွေကို လျစ်လျူရှုပြီး ပြုပြင်သွားကြဖို့ ဝိုင်းဝန်းကြံဆပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ….
တိုးတက်လာမယ့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို တွေးကြည့်မိတာနဲ့တင် ကြည်နူးမိပါကြောင်း
ရုပ်တည်နဲ့ ရွှီးသွားကြောင်းပါ ….
ရေးကြတာ အများကြီးပဲ .. အကုန် မဖတ်ဖြစ်သော်လည်း နည်းနည်း ဝင်ရေးကြည့်မယ်
တို့ ဆယ်တန်းတုန်းက (နယ်မှာပါ) ဆရာ ဆရာမတွေ ကျူရှင်လုံးဝ မပြ .. (ရတာနဲ့ လုံလောက်တယ်) ကျောင်းမှာ သင်တုန်း နားမလည်မချင်း သင်တယ် .. နားမလည်တဲ့အခါ ကျောင်း ဆင်းလဲ ဆရာ ဆရာမ အိမ်အထိ လိုက်မေးလဲ ဖြေတယ် ..
ကျောင်းသားတွေ ဆယ်တန်းမှာ ဂုဏ်ထူးထွက်တော့ တစ်ယောက် ၁၀ဝ ကျပ်စီ နဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်သေးတယ် (သူ့ လစာက ၄၄၀) တို့ နှစ်က သူ့ဘာသာကို ၂ ယောက် ဂုဏ်ထူးထွက်တယ် (၂၀ဝ ပေါ့)
အဲဒီကျောင်းက ကျောင်းဆရာ အများစုဟာ အခုအချိန်အထိ ကျူရှင်ထက် ကျောင်းချိန်မှာ စာပြတာကို အလေးထားကြစမြဲ ..
ဆယ်တန်းအတွက် နောက်ဆုံး ၂ လ ဆိုရင် ညပိုင်း အချိန်ပို ဆိုပြီး သင်ပေးသေးတယ် ..
ကျောင်း အောင်ချက် ကောင်းလွန်းလို့ မိဘတွေက နှစ်သက်ကြတယ် ..
အခုဆိုရင် မြို့နယ် စီမံချက် ဆိုပြီးတော့ ကိုးတန်းအောင်တွေကို မေလဆန်းက စလို့ ဆယ်တန်းစာတွေ စ သင်ပေးကြတယ် .. ဆရာတွေ ဘယ်တော့မှ မညီးကြဘူး .. စိတ်ပါလက်ပါ သင်ပေးကြတယ် ..
မိဘဆရာအသင်းကလဲ ကျောင်းဆရာတွေကို အမြဲ ထောက်ပံ့ဖို့ စီစဉ်ပေးကြတယ် ..
ဒီလိုကျောင်းမျိုးတွေ ရှိစေချင်သေးတယ် .. ဒီလို ကျောင်းဆရာတွေလဲ ရှိစေချင်သေးတယ် ..
အခု ဖြစ်နေကြတာက ရတာနဲ့ မလောက်လို့ ကျူရှင်ဆိုတာ ခေါ်သင်ကြတယ် ..
နောက်ပိုင်း အိမ်ရဲ့ လိုအပ်ချက် မိသားစုရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ လုပ်လာကြတာ
ဆရာဝန်တွေ ဆေးခန်း ဖွင့်တာကို အပြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်
ကိုင်း ..ပြင်ပ ဆေးခန်းတွေ မရှိတော့ဘူး ဆိုပါတော့ .. ရန်ကုန်ကို ဥပမာ ပေးမယ်
လူဦးရေ ခြောက်သန်း နီးပါး ရှိတဲ့အထဲမှာ တစ်နေ့ တစ် ရာနှုန်းပဲ ဖျားနာကြတယ် ဆိုပါတော့ (ခြောက်သောင်း)
အစိုးရဆေးရုံက စုစုပေါင်း (၁၈) ခုလောက်ရှိတယ် .. မြို့နယ် ဆေးခန်း (၄၀) ရှိတယ်
လက်ခံ ကြည့်ပေးနိုင်တာ စုစုပေါင်းမှ (၂၀၀၀၀) ဒါက ပြင်ပလူနာကြည့်နှုန်းကို ခန့်မှန်းကြည့်တာ
ကျန်တဲ့ လူနာတွေ ဘယ်မှာ ပြရမှာလဲ ..
အဲဒါကို ပြင်ပဆေးခန်း ဆရာဝန်တွေက ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာ .. ဆရာဝန်မို့လို့ ဆရာဝန်ဘက်က ပြောတာ မဟုတ်ပါ .. နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအရ ပြောတာပါ ..
BBC ကပြောတာ ဝမ်းမနည်းပါနဲ့ကွာ။
လူတန်းစားအသီးသီး အလွှာအသီးသီးမှာ ကောင်းသောသူ မကောင်းသောသူရှိစမြဲ့ပါ။
စေတနာ ဝါသနာ အနစ်နာ ဆိုတဲ့နာသုံးနာအပြင် တပည့်များရဲ့ချစ်ခင်လေးစားတာက
လွဲလို့ ငွေကြေး ဥစ္စာများစွာမရမှန်းသိပေမယ့် မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့
ဆရာဆရာမ ဘဝကို ခံယူခဲ့ကြသော ရှေးကဆရာများနဲ့အခုခေတ်(အားလုံးတော့ မဆိုလိုပါ)
ရရာအလုပ်ကို ဝင်လုပ်ကြရင်း အသပြာကိုသာ မြင်တော့တဲ့ဆရာ ဆရာမများကြားမှာ ကွာခြားချက်တော့
အခုခေတ်မှာလဲ ဝါသနာပါလို့ ဆရာဆရာမဘဝကိုရွေးချယ်ထားသော မွန်မြတ်သောစိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်
အဲတော့ အသပြာဆရာ ဆရာမ များထဲမှာ ကိုယ်က ကင်းအောင်နေနိုင်ဘို့ဘဲလိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်က ကောင်းအောင်နေရင် ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေနိုင်ပါတယ်။
အခုခေတ်ရဲ့ပြောင်းလဲလာသော စိတ်ထားများအရ လူအတော်များများသည်
ကောင်းသောနေရာမှာတော့ ယှဉ်မကြည့်ဘဲ မကောင်းသောနေရာများမှာသာ ကြေးတန်းညှိလိုု့နေကြတာကတော့
၁။ ဘာကို ဘယ်လို ထင်မြင်ချက်ပေးချင်သည်ဖြစ်ပါစေ အများသူငါ သက်ဆိုင်သော နေရာဖြစ်သည့်အတွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း မပြောစေလိုပါ။ ဥပမာ ရိုင်းရိုင်းတွေ မပေးစေလိုပါ။ (၇ရ ကောင်လေး ကို ဆိုလိုပါသည်။)
၂။ တကယ်တမ်းတော့ မလုပ်ခင်က ကြိုတင် စိတ်ပိုင်းဖြတ်လို့ ရနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမအလုပ် လစာနည်းရင် စကတည်းက ဝင်မလုပ်နဲ့ပေါ။ ရှင်းနေတာပဲလေ။
လုပ်ပြီးမှ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဝေလေလေ နဲ့ ရောမချပါနဲ့။ လစာနည်းတယ်ပြောပြီး စာသင်ပေးတာကကော ကြိုးစားပမ်းစား သင်ပေးကြလို့လား။ ခုခေတ်မှာ ကလေးတွေဆီက ညာစားနေတာက များများပါ။
၃။ ဆရာဆိုတာ အလွန်မွန်မြတ်သော အလုပ်။ မြန်မာပြည်တင်မက။ ဒီလိုမွန်မြတ်သော အလုပ်အတွက် သူ့တို့တွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်အပြင် esteem needs ကိုပါ အလုပ်ကပေးနိုင်မှသာ ဖြစ်မှာပါ။ ဒီကိစ္စက တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ငွေကြေးမူဝါဒ နဲ့ ဘဏ္ဍာရေး မူဝါဒ ကိုပါ ထည့်ပြောရမှာဆိုတော့ ရွာထဲမှာ ရန်ဖြစ်မနေကြပါနဲ့တော့။
ဆရာ၊ ဆရာမတွေကျူရှင် သင်တာ အပြစ်တော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်
ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ သူတက်ပေါ့ မတက်ချင်လဲ မတက်နေပေါ့ နွယ်ပင် တူမလေး ကျောင်းမှာလဲ သူတို့ အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျူရှင်ပြတာပါပဲ ဒါပေမဲ့ မထားတော့လဲ ဘာမှမပြောပါဘူး အခုဟာက ဆရာ ၊ ဆရာမ တွေအကုန်လုံးနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး ဒီအထဲမှာမှ စုန်းပြူးတွေတော့ပါမှာပေါ့ ကောင်းတဲ့ ဆရာ ၊ ဆရာမတွေလဲ ရှိပါတယ်လေ …
ဟုတ်တယ်လေ။။။ ကျူရှင်သင်တာကို အပြစ်မပြောပါဘူး။။။ ကျူရှင်ဘာ့ကြောင့်သင်ရသလဲ။။။ လစာနဲ့မလောက်လို့ ။။ နဲလို့ပေါ့။။ ဒါကို ဆရာဖြစ်ချင်ရင် စီးပွားရေးမလုပ်နဲ့တို့ဘာတို့ပြောလို့မရဘူးလေ.. ပြောရင် ကိုယ်ချင်းမစာရာကျမှာပေါ့။။ လူလူချင်းစာနာပါ။။ အဓိက က ကျူရှင်ပြပြီး သူ့ဆီမှာ ကျူရှင်မယူတဲ့ ကလေးတွေကို ရစ်တဲ့ စုန်းပြူးဆရာ ၊ ဆရာမ များကို ဆိုလိုပါတယ်။။ ဒီလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြပါ။။။ ဒီလို ရစ်တဲ့ ဆရာမနဲ့ တကယ်ကြုံခဲ့ရဖူးလို့ပြောတာပါ။။ အဲဒါက တော်တော် ဆိုးပါတယ်။။ ခနဲ့တဲ့တဲ့ပြောတာတို့၊ အတန်းထဲမှာ အရှက်ကွဲအောင် လုပ်တာတို့။ စာမေးရင်တခြားလူမမေးဘဲ ကိုယ့်ပဲရွေးမေးတာတို့ ပေါ့လေ။။ အမျိုးမျိုးစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးတာပေါ့။ ကိုယ့်လိုအကြောမာတဲ့ ကလေးကတော့ ဘာဖြစ်မှာလဲ။။ ရစ်ရင်လဲမသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်။ စာမေးရင်လည်း ကိုယ်သိသလောက်ဖြေလိုက်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှမနေပါဘူး။။ အဲလိုအရစ်ခံရတဲ့ တခြားသူငယ်ချင်းတွေကတော့ တငြီးငြီးတညူညူပေါ့လေ။ အဲဒါမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်တာအမှန်ပါ။ ဆရာဆိုတာ မြင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေပါ။။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်တာလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တပည့်တွေပေါ်မှာ ကျောသားရင်သားမခွဲပဲ သင်ကြားပေးရမှာပါပဲ။။။။။။
ဆရာ..ဆရာမတွေနဲ ့Enginneer .Doctor…ရောပြောလို ့တော မရဘူးထင်တယ်
ကျူ ရှင်ပြကြတာ အပြစ်မဆိုသာပါဘူး..လစာနဲ ့လောက်မှာမှမဟုတ်တာ
ပိုက်ဆံယူပြီးစေတနာလေးနဲ ့သင် ပြီး ကျူရှင်မယူတဲ ့သူတွေကိုလဲပြဿနာမရှာသင် ့ဘူးပေါ ့နော်
ခင်ဗျားက တော်တော်ကြီးပြီလား ဆိုတာ မသိပေမဲ့ ၇ရ ဟာ ကောင်လေး မဟုတ်ပါဘူးဗျ။
စေလိုပါဆိုတဲ့ စေတနာကိုတော့ နားလည်ပါတယ် သို ့သော် ရွှေပြည်အေး သမား ပုံစံမျိုးတော့ မနှစ်သက်ပါ။
ဥပမာ ခပ်ယဉ်ယဉ်လေးတွေ ကျုပ် မသုံးတတ်ပါ။ စေတနာကို နားလည်သော်လည်း အများက ဆုံးဖြတ်ပါစေ။
ကျုပ် က ဘုတ်ကြီးမြှောက် ကြီးဘုတ်မြှောက်တွေကို သိပ်ရွံတယ်။
ဘုတ်နဲ့ ကျီး ပါကွယ်
ကျုပ်တို့ရွာမှာ လက်ဝှေ့ပွဲရှိတယ်ဗျ လာခဲ့ကြပါလား
ကျုပ်ကတော့ စေတနာတွေဝေဒနာတွေကို ဓာတ်ခွဲပြီးအဖြစ်မသဲခြင်ဘူးဗျ
သူများနဲ့မတူအောင် ကိုယ်ပိုင်စာချရေးရမယ်ဆိုလို့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့ဘဲရေးလိုက်ပါတယ်
ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေထုပ်လွှင့်တဲ့ လေဒီယိုတွေ
တီဗွီတွေက အာဘော်တွေကို နားထောင်ပြီးလိုက်ဖောနေကြတယ်လို့ကျုပ်ကထင်တယ်
ခင်ဗျာတို့ရဲ့ ကြောင်သူတော်အယောင်စောင်မှုတွေကို ခဝါချသင့်ပြီ ( ကိုကြောင်ကြီးနှင့် လုံးဝဥဿုံ မပတ်သက်ပါ )
ကျုပ်ရဲ့အမြင်ကိုပြောတာနော် သည်ချေမရှိဘဲနဲ့ ကျုပ်ကို လာပြီးဖြစ်မသဲနဲ့
ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်း ကျုပ်က ခုနစ်တန်းတောင်မအောင်တော့
ဆရာ ဆရာမဆိုတာက ( ဟို..နွေရာသီ လုပ်အားပေးတဲ့ ဆရာတွေ ဆရာမတွေမပါဘူးနော် )
ကိုယ့်ရဲ့ ကျောင်းစာဖြေတဲ့ အမှတ်အရည်တွက် သို့မဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီး
ဆိုလိုတာက ယနေ့ ဆရာဆရာမတွေ ( ဆရာမတွေဘဲများပါတယ် )
သူတို့တွေ ဒီ ကျောင်းဆရာမဆိုတဲ့ အလုပ်ကို လျှောက်တဲ့အချိန်မှာ
သူတို့ရဲ့ စာအောင်မှတ်ဟာ အင်္ဂျင်နီယာတို့ ဆရာဝန်တို့ လျှောက်လို့ရတဲ့အမှတ်မျိုး
မဟုတ်လောက်ဘူး ( ဒါ တစ်ပိုင်းသွားတယ်နော် )
မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အချိန်တန်တဲ့အခါ မိဘပေးစားတဲ့လူကိုယူရတယ်ဗျ
မိန်းမဝတ်တရားကို ကျေသည် ၊ မကျေသည် ဒီလိုသွားတယ် ( အစကတည်းက သူလဲ ခပ်ရွရွဆိုတော့ အံကိုက်ပေါ့ )
( ကိုယ်က အခြေအနေတစ်ခုခုမှာ ကျောင်းဆရာမဆိုတော့ ဂုဏ်ရှိတာပေါ့ ဒါတကယ်ရှိတယ်နော်
တစ်ချို့ဆို ကျောင်းဆရာမဆိုတဲ့ ဂုဏ်နဲ့ သဌေးလင်တွေရပြီး ကျောင်းဆရာမ မလုပ်တော့ဘူး
သဌေးမယားဘဲလုပ်တော့တယ် ( တစ်ခုရှိတယ် ကိုယ်ကလည်း ကျိကျိတက်သဌေးသမီး စာကလည်းတော်
ဆရာမလုပ်တယ် ဆိုတာ တစ်ယောက်တလေရှိကောင်းရှိမည် ( ရှိကောင်းရှိမည် )
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ( ဒါက သက်ညှာပေးလိုက်တာ )
အဲ……………… အဲ့ဒီမှာ ပြဿနာက စပြီ
လင်ရတဲ့အခါ တာဝန်ကျေ မယားအလုပ်လုပ်သလား
ဒါ့ကြောင့် ကျုပ် ခင်ဗျားတို့ကို အထူးပြောခြင်တာက
သူတို့လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆရာမဆိုတဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အချိန်မှာ
ရတဲ့ လစာနှစ်ပဲတစ်ပြားလေးကတော့ ဘယ်လို သွားပြီးစားလို့လောက်မှာလဲဗျာနော
ဒီလိုလေ ပိုက်ဆံမရှိဘဲ ထမင်းမစားရတော့ ဘယ်လိုလုပ်စာသင်နိုင်မှာတုန်းဗျ
လင်းဝေကျော် စာကိုဘယ်လိုသင်ခဲ့တာလဲ လစာနည်းလို့မလုပ်ရင် မင်းသားသမီးတွေဘယ်မှာစာတတ်မှာလဲ ဘာလုပ်စားမှာလဲ မငိးစဉ်းစားပေါ့ ဆရာမဆိုတာမင်းရှိခဲ့မှာပါ ပညာရေးနဲ့ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်အံ့တဲ့ ပင်းလိုလူမျိူးတွေကြောင့် အမျိူးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာပဲ
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာ ပြောကြ လုပ်ကြမှာပဲ
နောင်တဆိုတာက နောင်မှ တတတ်တဲ့အမျိုးပဲ
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှ မပြောတတ်ဘူး
ညအိပ်ရင် အနှောင်အဖွဲ့ကင်းစွာ (စိတ်သန့်စွာနဲ့) အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် အမြဲတမ်းနေတယ်
ဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့လည်း ဘာမှစိတ်မသန့်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့
တပ်မ ၇ရ ပြောချင်တာ ဘုတ်ကြီး = big boat လှေကြီးဖြစ်ပါတယ် ဦးပေါက်။ စကားလိမ်နဲ့ ရေးထားလို့ ပြန်ဖြေပေးရရင် လှေကြီး = လှီးကြေ။ နေရာကောင်းရဖို့ ရင်းထားသမျှအတွက် သူများကို နာနာလှီးမှကြေမယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်သစ်တပ်မတော် ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
၇ရ ရေ ကိုယ်က ရွှေပြည်အေးသမားလည်းမဟုတ် ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မြှောက်နေတာမဟုတ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်ရင်က အဆင့်ရှိပါသေးတယ်။ လေသံသာ ကြမ်းနေတာ။
တော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတာကတော့ အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်မှာကို တလွဲမြင်တဲ့ ပိုးကောင်ပဲကွ။
ငါတို့ စာသင်တုန်းကတော့ လစာ ကိုပဲစားကြတဲ့ခေတ်ကွ။
ပညာရေးနဲ့ ခေတ်မီတိုင်းပြည်တည်မယ်ဆို ဒီအချိုးတွေနဲ့ ရမလားကွ။
လေသံကိုက နလပိန်းတုံး အစိုးရအာဘော်နဲ့။
အကျိုး နဲ့ အကြောင်းကို ဆင်ခြင်တတ်အောင်လုပ်။
virus ရေ မင်းကိုတစ်ခုမေးမယ်ကွာ
စာမေးပွဲမှာကွာ ငါသင်ရတဲ. ဆယ်တန်းကဆရာမကိုငါက သူသင်တဲ.ဘာသာကိုဖြေရတဲ.နေ.ပေါ.
အဲ.ဒီနေ.မှာ ဘာသာရပ်ဆရာမက အခန်းတိုင်းကိုလှည်.ပြီးတော. မေးခွန်းရဲ. မရှင်းတဲ.အပိုင်း( မေးခွန်းလွှာပေါ်က မထင်မရှားဖြစ်နေတဲ.စာမျိုး) အဲ.ဒါတွေကို လိုက်ပြီးပြောပြပေးရတယ်
အဲ.ဒီအချိန်က ငါတို.ကလဲ သိတဲ.အတိုင်းကျူရှင်တက်တယ်ကွာ
ဖြတ်ပြောအုံးမယ် အဲ.ဒီကျူရှင်ဆရာကလဲ ငါတို.ကျောင်းက ဆယ်တန်းသင်တဲ.ဆရာပဲကွာ အဲ.ဒီဆရာကိုငါလဲလေးစားတယ်
သူက ရန်ကုန်က ကျောင်းမှာအသင်အပြအကောင်းဆုံးလို.တစ်မြို.လုံးက သူနဲ.သင်ဖူးတဲ.ကျောင်းသားတိုင်းလက်ခံထားတာ ကျောင်းမှာသင်တာကိုပြောတာနော်
သူအနေနဲ. ရန်ကုန်သား ရန်ကုန်မြို.မှာဘယ်လိုပဲသင်သင် သူ.ဘဝအတွက် တိုက်နဲ.ကားနဲ.နေနိုင်လောက်အောင် တော်ပေမယ်. ငါတို.နယ်ကို လာပြီးသင်နေတာ
ဲအဲ.ဒီမှာ စာမေးပွဲခန်းထဲ ( ငါတို.ဖြေတဲ.အခန်း) ကိုဒီဆရာမကရောက်လာတယ်ကွာ
ငါတို. အဲ ငါကလဲ မေးခွန်းလွှာက မထင်မရှားဆိုတော. မေးတာပေါ.
လုံးဝကိုမပြောဘူးကွာ အဲ.ဒါတကယ်.အဖြစ်အပျက် ငါကိုယ်တိုင်အဲ.ဒီနှစ်ကစာမေးပွဲကျတယ်ကွာ
ငါ.ပြောတာရဲ.ဆိုလိုရင်းက ဆရာ ဆရာမတိုင်းလဲ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွ
မင်းကလဲမင်းအမေ ကဆရာမဖြစ်နေတော. နာမှာပဲ ဒီလိုတွေအပြောခံရမယ်မှန်းသိရင် အစကတည်းက
ဒီပို.စ် ကို မတင်နဲ.လေ ပို.စ်တစ်ခုတင်ရင်တော. အဲ.ဒါနဲ.ပါတ်သက်တဲ. စကားတွေကိုတာဝန်ယူရမှာပဲလို.
ငါတို.ရဲ.သူကြီး ဦးခိုင် ကပြောထားတာပဲ မဟုတ်လား
အဟေး. ဟေး.. . ဒါမှ တို့ရွာကွ..
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်. အေးအတူ ပူအမျှ နေကြမယ် ဆိုပေမယ့်လည်း..
အတူတူနေကြပြီဆိုရင်တော့ ပဋိပက္ခဆိုတာ ရှိကြစမြဲပါပဲ..
အဲဒီကနေပဲ တိုးတက်မှုကို ယူကြရတာ..
စိတ်ဆိုးရင်ဆိုး. စိတ်ကောက်ရင်ကောက်… ထိပ်ပေါက်အောင်တော့ မလုပ်နဲ့..
အော်ချင်အော်.. ငေါက်ချင်ငေါက်..ဟိန်းဟောက်တာတော့ မလုပ်နဲ့..
အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ်မှာ.. မပြေမလည်နဲ့ ပြီးသွားတာထက်စာရင်..
ဖြစ်သင့်တာကို လုပ်သင့်တာကိုသိသွားတာ အကောင်းဆုံးပဲ..
မတူခြားနားတာတွေကို တူညီမှုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့က ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများရဲ့ အလုပ်ပဲ..
မြန်မာစကားပုံ “ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုတ်”ဆိုတာလေးကို သွားသတိရမိတယ်။ အားလုံး အတွေးကိုယ်စီနဲ့ပေါ့။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီနေ့ကျောင်းဖွင့်ရက်မှာ ကျောင်းအပ်ရင်းိကိုယ်ကိုတိုင် ခံလာရတာလေးတွေလည်းရှိတယ်။ မပြောတော့ပါဘူး။“ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုတ်” သွားမှာစိုးလို့ပါ။
တို့အမေလည်း ဆရာမပဲ …… ဝါသနာပါလို့ အလုပ်ဝင်လုပ်တာ အနှစ် သုံးဆယ် ပြည့်တော့မယ်… ။ ရာထူးတိုးအောင် SAT ဖြေပါဆိုလည်း မဖြေဘူး …. မူလတန်းကလေးတွေနဲ့ နေရတာ stress တွေနည်းပြီး ပျော်စရာကောင်းတယ်တဲ့ … ဒါနဲ့ နှစ်တွေ အကြာကြီး မူလတန်းပြအဖြစ်နဲ့ လုပ်နေတုန်း … ယခုထိပဲ … ။
ကျူရှင်လည်း မသင်ဘူး …. ဒါတောင် လာလာမေးကြလို့ … အမေမသင်လျှင် သမီးလိုက်သင်မယ်ပြောတော့မှ မိဘတွေ လာမမေးတော့တာ… ။ etone ကိုတော့ လန့်သားပဲ အဟီး
လိုချင်တာတွေဖြစ်လာစေချင်တော့ဒီမိုကရေစီတဲ့ ဟာသပဲ ခံရပြန်တော့တစ်မျိုး မင်းပဲတတ်နိုင်တယ် i am virus